पौरखी पोखरेली महिला : मास्कपछि बनाए पिपिई | NepalDut
पौरखी पोखरेली महिला : मास्कपछि बनाए पिपिई
बजारमा सेनिटाइजर र मास्क अभाव लकडाउनअघि नै थियो । लकडाउन भएपछि पिपिई अभावमा कतिपय अस्पतालले सेवा दिन सकेका छैनन् । देशको यस्तो विपद्मा सघाउन केही दिनअघि मस्क बनाएका पोखरा ५ का महिलाले पिपिई पनि निर्माण गरेका छन् ।
हाम्रो रचनात्मक गार्मेन्ट उद्योगका महिला यसरी क्रियाशील भएका हुन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका बीच घरमै सुरक्षित रहेर उनीहरुले पिपिई बनाएका हुन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा अर्जुन आचार्यले उनीहरुले बनाएको पिपिई हेरी प्रयोग गर्न उपयुक्त ठह¥याएका छन् ।
डा आचार्यले अस्पतालका लागि १ हजार पिस पिपिई अर्डरसमेत गरेका छन् । गार्मेटले बनाएको मास्क पनि ६ सय वटा अस्पतालले किनिसकेको छ । यसअघि नै उनीहरुले फेवासिटी अस्पताल र रुपा गाउँपालिकाको कोरेन्टाइनमा बस्नेहरुका निम्ति मास्क उपलब्ध गराइसकेका छन् ।
संकटका बेला सहयोग नगरे कहिले गर्ने ? नागरिक हुनुको कर्तव्य निर्वाह गर्नुप¥यो नि ।
गार्मेन्टले बनाउको पिपिई हावा नछिर्ने र पुनप्रयोग गर्न मिल्ने रहेको उद्योगकी संयोजकसमेत रहेकी वडा सदस्य अञ्जु क्षेत्रीले बताइन् । अस्पताल र प्रशासनका लागि आवश्यक परेका बेला सघाउन संकटमा सक्रिय भएको उनी बताउँछिन् । केसी भन्छिन्, ‘संकटका बेला सहयोग नगरे कहिले गर्ने ? नागरिक हुनुको कर्तव्य निर्वाह गर्नुप¥यो नि । कोरोनाको संकट रहेसम्म यसरी नै दायित्व निर्वाहमा जुट्ने उनले प्रतिवद्धता गरिन् ।
यो रचनात्मक गार्मेन्ट पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ५ को अगुवाइमा खुलेको हो । ३३ महिला सञ्चालक रहेको उद्योगकी अध्यक्ष राधिका अधिकारी छिन् । अहिले घरमै उनीहरुले बनाएका हजारौै मास्क विभिन्न अस्पतालले घरमै आएर लगिरहेका छन् ।
उद्योगको अभिभाकत्व वडा नं. ५ ले लिएको छ । पोखरा ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपाली महिलालाई स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउन खोलिएको गार्मेटले संकटमा उदाहरणीय काम गरेकोमा खुसी प्रकट गरे । वडाकै नेतृत्वमा महिलालाई उद्यमशील, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन गार्मेट खोलिएको गार्मेन्ट लक्ष्य प्राप्तिको दिशमा गएको उनको भनाइ छ ।